Date My Pet » 5 Matanho Kukunda Ukama Communication Zvinotadzisa
Vakaroorana kunotozongoita ukasangana kutaurirana hiccups munzira, kana vari uchangobva kufambidzana kana vachipemberera emakore pamwe chete. Kana kuri kutsauka, ava zvakaoma kufambisa uye zvinoda vanoziva kuitwa kubva vakaroorana. Kuyeuka mazano anotevera zvichakubatsira pakudzi- kusawirirana iwayo vanozokunda:
1. Dzivisa kunyararira kurapwa: Vakadzi nevarume vose vane mhosva nzira iyi, uye chinopa nengozi uye zvinoparadza. Kuvharira pasi ari vanotova kuvharira mudiwa wako kubva, uye kuti hazvina zvinobatsira kugadzirisa nhau chaidzo dziripo ruoko. Sezvo zvakaoma zvingaita sezvinoshamisa, shandisa mashoko ako kuratidza manzwiro ako, uye usatya kuwana chaicho. yeuka, munhu kodzero chinoenda kushanda newe pamusoro ukama matambudziko, kwete kushandisa manzwiro ako sezvo zvombo newe.
2. Musaita zvekungofungira: Yakafanana kunyararira kurapwa, zvekungofungira ndiwo mumwe muenzaniso kusiya kwako mudiwa mafungiro panze, uye hadzisi akanaka kana munhu. Unogona kufunga kuti pfupi mhinduro ake anorevei iye warasikirwa kufarira, asi iye anogona chete zvakawanda mberi kubasa. Kana musingadi kubvunza uye kuvimba pachinzvimbo pamusoro fungidziro yako, musingadi kuwana chokwadi, uye imi sezvingabvira kuzvimisira kuti vakawanda nharo pakupedzisira.
3. Kuzadzikisa zvakanaka tsika: Kana uchinzwa sezvinoita mumwe wako haasi ndikuratidze rudo zvikuru sepakutanga, edza achiunza yawo kwokurumbidza nzira kuburikidza pfungwa. "Ndinoda kumbundirwa venyu,"uye, "Ndinosuwa zvenyu mangwanani mangwanani mameseji,"Mune mienzaniso non-pamutanhiko kukurudzira zviito zvamunoda. nzira iyi, wasvikako rako pfungwa mhiri chero mutauro kumupomera.
4. Pachako manzwiro ako: Varume nevakadzi vose mupfungwa, asi avanotarisira kuratidza manzwiro iwayo akasiyana zvachose nzira. Mukadzi anogona kuchema, uye munhu anogona they fume. Vose vane chikonzero mupfungwa mhinduro, uye zvose ndezvake munhu anonzwa navo. Pane kuudza mudiwa wako, "Iwe wakaita uchinzwa benzi,"Ndiro kumupomera mutsara, tsanangura manzwiro ako ari possessive matauriro, uye anopa kutsanangurwa.
Semuyenzaniso, "Ndainzwa benzi kana iwe wakaita mbeveve blondi rinonyadzisira" iduku nharo pane, "Iwe nguva dzose kuti ndinzwe benzi." Wokutanga mutsara rinopawo mumwe wako mukana kutsanangura pachake uye anorega iye unoziva kwainyatsobva nyaya.
5. Garai zvakanaka: Ichi toughie, Ndinoziva! Zviri nyore chaizvo kuti tigumbuke kana kutaura zvinhu imi hazvirevi. Shingaira kuti kugara zvakanaka uye kushanda pakugadzirisa nyaya healthily. chokwadi, Zvinhu zviri kuenda kuridza kukwira dzimwe nguva. Ndizvo zvinoitika wevanhu vaviri kugoverana upenyu hwavo pamwe chete. Just yeuka kugara tichirangarira zvikonzero muri pamwe pakutanga, uye akaisa pfungwa kuramba kuti chisungo.